Ku rakib Steam Debian Wheezy adigoon dhimanayn isku dayga | Laga soo bilaabo Linux
Ku rakib Steam Debian Wheezy adigoon dhimanin isku dayga
Waqti dheer 3000 | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Dhamaan waad salaaman tihiin. Xaqiiqdii, qaar badan ayaa horey u raaxeysan doona Steam loogu talagalay madal GNU / Linux. Si kastaba ha noqotee, qaar badan oo ka mid ah kuwa isticmaala Debian Stable (Wheezy)Waxay madaxooda ka jabinayaan isku dayga ay ku rakibayaan Steam aad u badan.
Waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo adigoon u dhiman isku dayga, in kasta oo inta badan natiijooyinka aan lagu guuleysan, maxaa yeelay ku tiirsanaanta ay u baahan tahay waxay ku jirtaa Ubuntu repos, iyo / ama taageerada qaab-dhismeedka badan lama hirgelin.
Si loo sameeyo shaqadan, waa inaan sameynaa waxyaabaha soo socda:
Ku rakib taageerada Debian Wheezy multi-architecture:
Ku rakib ku tiirsanaanta kuleylka na weydiinaya (nasiib daro, Ubuntu), iyada oo loo marayo nidaamkan:
Ku soo dejiso xirmada Steam adoo adeegsanaya nidaamkan:
Sug macmiilka inuu cusbooneysiiyo, waan galnaa waana intaas.
Haddii aad haysato kaararka fiidiyowga sida ATI / AMD ama NVIDIA, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad rakibto darawallada lahaanshaha si ay uga sii fiicnaato cayaaraha aad bilaashka ku soo dejisanayso ama aad ka iibsanayso bartaan.
Waxaan rajaynayaa inay faa iido u ahayd nafahaas iyagu isdilay iyagoo raadinaya hab lagu rakibo Steam iyaga oo aan ku dhiman isku dayga
PS: Waa kan shaashadayda 'Steam' ka debian hiinraag:
Mana idhaahdo macsalaamayn anigoon marka hore mahadsanin Isticmaalayaasha uumiga, si Debian Wiki iyo Golaha rasmiga ah ee Debian si aad u suurtogaliso jilitaankan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Ku rakib Steam Debian Wheezy adigoon dhimanin isku dayga
Waad ku mahadsantahay wadaagida eliotime3000. Runtu waxay tahay in Steamku yahay mid layaableh, ciyaaro aad u wanaagsan oo asal ahaan ka socda Linux oo maalin walba si ka sii fiican oo ka wanaagsan.
Hagaag, waad ku mahadsan tahay amaanta. Sidoo kale, maadaama aanan isticmaalin SUDO, waan ilaaway inaan dhigo (mahadnaqa tifaftirayaasha ku darista sudo iyo "&" ku leh), haddii aadan ordi faylka .sh, waad sameyn kartaa:
Waqti fog ka hor waxay sii daayeen nooca 64-bit ah, hadda waa lagama maarmaan inay horumariyayaashu sii daayaan ciyaaro ku saabsan noocaas.
Taas waan kugu raacsanahay. Sidoo kale, maadaama aan isticmaalo 32-bit Debian Wheezy, ma ahan inay dhibaato dhacdo.
Inkasta oo macmiilka Steam uu horeyba u ahaa 64-bit, haddana wuxuu weli ku tiirsan yahay xirmada 'Debian multiarch package' si uu u maamulo ciyaaro aan weli 64-bit aheyn.
Si kastaba ha noqotee, waxaan tijaabin doonaa ciyaaraha sida DOTA 2 iyo Kooxda Fortress (Ma haysto lacag aan ku bixiyo ciyaaraha sida Half-Life weli).
Sirta ayaa ah in laga faa'iideysto dalacsiinta, waxaan ku iibsaday sagaalka mid ka mid ah. Sidoo kale uumiga waxaa ku jira xirmooyinka hooseeya
Saaxiib in faallooyinkaaga: (nasiib daro, Ubuntu), uma eka wax xoogaa sharaf dhac ah, maaddaama Ubuntu ay mahadsan tahay waxaa jira Steam Linux, maadaama Ubuntu GNU / Linux ay u noqotay mid caan ah oo waxtar u leh Valve inuu ka fekero ku darista Linux ciyaarta. suuqa, waxaan kaliya isku dayaa inaan sameeyo dhaliil wax dhiseysa, wax intaas ka badan majiro, qof walbaa ra’yigiisa ayuu leeyahay waana ixtiraamayaa taas, Salaan
Waan ogahay, laakiin waxaan ula jeeday ku-tiirsanaanta ay weydiisato (jockey-common). Imtixaanka (Jessie) iyo Laamiga aan xasilloonayn (Sid) laamahooda ma weydiistaan ​​ku-tiirsanaantooda oo xitaa lagama helo meesha ugu weyn ee laamahaas Debian ah.
Naa, sababta kaliya ee uguumi kuleylka Linux, waa rabitaanka diyaarinta konsol u gaar ah oo kusalaysan Linux
sidee u shaqeeyaa kernel 3.2? waa inaan hadda adeegsado midka ugu cusub, laakiin U-da iyo iswaafajinta darawalka lahaanshaha dhaxalka ah waxaan qorsheynayaa inaan u wareego eOS oo adeegsada kernel-ka
Hadda, waxaan u socdaa si habsami leh oo aan wax dhibaato ah (oo waxaan isticmaalayaa fiidiyowga isku dhafan ee Intel ee la cusbooneysiiyay MESA).
Ma aqaano in qaabkani wax faa iido ah ka haysto kii aan sameeyay, beddel bakhaarka ugu weyn ee jessie, apt-get update, apt-get rakib uumi: i386 ka dibna u beddel bakhaarka ugu weyn dib u celinta wheezy
Waxba saameyn kuma yeelaneyso nafteeda, illaa aad rabto inaad u hurto xoogaa xasillooni ah si aad u rakibto nooc 100% loo qaabeeyey Debian.
Waayahay, waad ku mahadsan tahay caddaynta.
Jessie runtii way deggan tahay.
Ma fiicnaan laheyd in la rakibo sida OtakuLogan leeyahay ama sida eliotime3000 soo jeedineyso?
Haddii ay adiga kuu shaqeyneyso, waad ku talineysaa. Taasi way fududahay
Miyaad u maleyneysaa inay fiicantahay in la beddelo nooca libc6 sidan oo kale? taasi ma shaqeyneyso kiisaska oo dhan ..!
Ku jawaab xididka
Laakiin taasi waxay kuxirantahay ku-tiirsanaanta ay abuurto marka la rakibayo xirmada rasmiga ah .deb.
Aaaay indhahayga oo wata mawduuca Gnome ee caadiga ah iyo astaamaha Debian !!!
Aad baan ula qabsaday GNOME illaa iyo hadda oo aan isticmaalo maalin kasta. Aan aragno haddii aan ka soo baxo daqiiqad si aan u neefsado hawo cusub.
: Ama kaliya uumi waxaan go'aansaday inaan u wareego kubuntu, waxaan u maleynayaa inay tahay waqtigii aan dib ugu laaban lahaa debian ama crunchbang 😀
Taasi waxay kugu dhacaysaa inaad rumaysan weydo Debian GNU / Linux.
Hadda, waan ku faraxsanahay Steamkeyga waxaanan sugayaa xaqiijinteyda inaan si dhaqso leh u ciyaaro DoTA 2.
Horey ayaan u haystay 😀 laakiin taasi waxay ahayd wax xun oo iskudayay inaan rakibo markii aan beta ku jiray isla markaana aan si dhakhso leh u quusto, iskuday kooxda heysata regnum, sidoo kale waa ciyaar fiican, waa nooc ka mid ah wow.
Markii aan isku dayo inaan rakibo .deb waxaan helaa tan: /
Xirmadaani waa mid aan la iibsan karin
Ku tiirsanaanta laguma qancin karo: libc6 (> = 2.15)
Waxaan u maleynayaa in qoraalka ay sameyneyso ay ku rakibayso nooc cusub oo ah libc6 bakhaarada ubuntu, marka waxaad haysataa laba ikhtiyaar: ama waxaad u adeegsan kartaa qoraalka si aad u sameyso, ama waxaad ku rakibtaa xirmada meelaha keydka ah ee baaritaanka.
Mahadsanid, laakiin waxaan isticmaalay qoraalka oo ma shaqeynayo: /
Haddii aadan marka hore helin "sh", markaa waxaad meel dhigaysaa oo aad qoreysaa magaca qoraalka waxaadna garaacaysaa qoritaanka.
soo baxa waa sida qalad ku tiirsanaanta, laakiin ma arko sida loo saxo.
Iskuday adoo u adeegsanaya qoraalka sidii xidid. Badanaa ma isticmaalo SUDO maxaa yeelay waxay igu dhibaysaa ogolaanshaha.
Macluumaad wanaagsan. Sidoo kale waxaan ku rakibey qoraal runtuna waxay tahay inay timo badan tahay.
Qoraal fiican, laakiin ma aanan ogeyn sida loo isticmaalo qoraalkaas GitHub, sidaa darteed waxaan u aaday inaan ka baaro shirarka Steam ee xalka la taaban karo.
Dhibaato ayaan qabaa, wax walba way hagaagsan yihiin illaa qaybta ii sheegta
sudo dpkg -i uumi.deb
waa halka ay tan iiga muuqato.
xididka @ NV55S09u: / guriga / diego-m # sudo dpkg -i steam.deb
(Akhrinta keydka xogta 128696 XNUMX faylasha ama tusaha hada la rakibay.)
Diyaarinta si loo badalo uumiyaha-kiciyaha 1.0.0.42 (adoo adeegsanaya steam.deb)…
Kala bixida bedelka uumi-kiciyaha ...
dpkg: Dhibaatooyinka ku tiirsanaanta waxay ka hortagaan qaabeynta uumi-kiciyaha:
uumi-kiciyaha wuxuu kuxiranyahay libc6 (> = 2.15); Si kastaba ha noqotee:
Nooca 'libc6: amd64 ′' ee nidaamka waa 2.13-38.
dpkg: qaladka ka shaqeynta uumi-soo-saaraha (- rakib):
arrimaha ku tiirsanaanta - bidix aan qaabeyn
Ka shaqeynta waxyaabaha kiciya nin-db ...
Ka shaqeynta waxyaabaha kiciya ee hicolor-icon-theme ...
Ka shaqeynta waxyaabaha kiciya ee sheyada desktop-file-ka ...
Ka shaqeynta waxyaabaha kiciya gnome-menus ...
xididka @ NV55S09u: / guriga / diego-m #
iyo markaan isku dayo inaan ku tiirsanaado, libc6 mid ayaa isiiya isla: amd64 iyo libc6
xididka @ NV55S09u: / home / diego-m # apt-get rakib libc6: amd64
libc6 horeyba waxay ugu jirtay qaabkeedii ugu dambeeyay.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ordo apt-get -f install si aad u saxdo:
uumi-bixiye: Waxay kuxirantahay: libc6 (> = 2.15) laakiin 2.13-38 waa la rakibi doonaa
E: Ku tiirsanaanta aan la buuxin. Iskuday apt-get -f rakib pack xirmooyin la'aan (ama cadee shaqo laqabsasho).
xididka @ NV55S09u: / home / diego-m # apt-get rakib libc6
Waxaan rajaynayaa in dhibaatadaydu aysan ahayn salaan aad u muuqata iyo mahadsanid
Ku jawaab Pelukron
Waxaan kugula talinayaa inaad kula talisid inay dhigaan
Ku jawaab Virtuskr
Rabitaan Mario dijo
Qof ma i caawin karaa maxay tahay dhibaatadeyda
xididka @ debian: / home / wishmario / Downloads # sudo dpkg -i steam.deb
(Akhrinta keydka xogta 161869 XNUMX faylasha ama tusaha hada la rakibay.)
dpkg: arrimaha ku tiirsanaanta ka hortagga dejinta uumi-kiciyaha:
Gelitaankan waa in la cusbooneysiiyo ama laga saaro. Mar dambe ma shaqeyso.
Ku jawaab Javier Madrid
Dhibaatooyin ayaan ka qabaa rakibidda uumiga
Ku jawaab durbes
Stephen Laguerre dijo
Jawaab Esteban Laguerre
Waad salaaman tahay, uma qaadanaysid inuu yahay spam laakiin waxaan helay xalka ugu habboon, haddii kor ku xusan aysan kuu shaqeyn, u tag fiidiyowgan http://youtu.be/V5LkpR179WQ iyo sharraxaadda adeegso isku xirka labaad, fiiro gaar ah ha u helin fiidiyowga, ka dib sii gees (ka dib markaad riixdo liinka) meesha ay ku qoran tahay soo dejiso, faylkaas. zip file .deb ah ayaa la heli doonaa, ku rakib rakibaha softiweerka waana taas
Ma garanayo, tan waan isku dayay, laakiin wali way i guuldaraysaa,
Hagaag, tan ayuu markasta ii sheegaa; bash: ./debian_install.sh: Ogolaanshaha waa la diiday
iyo tan: Khaladaadka ayaa la kulmay intii lagu guda jiray ka shaqeynta:
sida muuqata qalad ayaan kuhelaa dhibaatooyinka ku tiirsanaanta due.
Ku jawaab Syrzechs
Wanaagsan !!, Waxaan hayaa wiilkeyga 9 jirka ah, oo ah ciyaar ciyaar iyo kala bar waqtiga uu daaqadaha ka soo galo ciyaar dhibaato ayuu leeyahay, taasi waa sababta aan Ubuntu u rakibay hadana waxaan rabaa in aan u guuro pc-ga kaliya debian xasilloonida waxaan u dhigaa uumiga oo aan u adeegsadaa softiweer bilaash ah iyo ciyaaro lacag leh madasha.
Salaan waxaan isku dayay qoraalka
oo tanna waan helaa markasta:
–2014-06-09 12: 01: 58– (isku day: 9) http://sh/
Ku xirida sh (sh) [193.223.78.211]: 80… wuu ku guuldareystay: Waqtiga isku xirku wuu dhacay.
Waxaan rabaa in aan isku dayo in aan ku ciyaaro dota in debian whezzy maxaa yeelay daaqadaha way ku guuldareysataa wayna i goysaa!
Ku jawaab panita
Hagaag waxaan ku xaliyay xiriiriyahan,
rakibi PlayOnLinux. waana diyaar
aan ku shaqeynaynin debian wheezy 64bits
errir: ma qancin karo ku tiirsanaanta: libc6 (> + 2.15)
Kadib markaan cusbooneysiiyo, waxaan helayaa qalad sidan ah:
Khalad dhimasha ah: Waa lagu guuldaraystay in la raro steamui.so
Aniguba isku mid baan ahay, wali kuumi rakibi kari maayo dhinaca debian sid
Waan xaliyay ... rakibida maktabadaha i386. Waxay u shaqeysaa si fiican hadda.
Anigu ma rakibi kari waayey, tan waan helay bash: ./debian_install.sh: Ogolaansho waa la diiday
Beddel qaabka farriimaha ee KMail 4.11